Maamulka Man United Oo Go'aan Muhiim Ah Ka Gaadhay Daafaca Leicester City Ee Harry Maguire - Miyay Daafaca Abid Ugu Qaalisan Ka Dhigi Doonaan? - Gool24.Net
Maamulka sarre ee kooxda Manchester United iyo tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagu soo warramayaa inay go’aan ka qaateen daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire kaas oo bar-tilmaameed u ahaa suuqa xagaagan.
Man United ayaa haatan mudo sanad ah daba socota Maguire, Tababarihii shaqada laga diray ee Jose Mourinho ayuu ahaa shaqsigii ugu horreeyay ee bar-tilmameed ka dhigta balse sanadkii hore gudoomiye ku xigeenka kooxda ee Ed Woodward ayaa kasoo horjeedsaday walow uu 60 Milyan oo kaliya ahaa.
Haatan United ayaa la sheegay inay tiraba laba dalab ka gudbisay daafacan waana laga soo diiday maadaama Leicester aysan doonayn inay daafacooda ugu muhiimsan fasaxaan iyaga oo aan u dagaalamin lacag fiicana ku helin.
Red Devils ayaa haatan haysta lix daafac dhexe oo kala ah Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe iyo Eric Bailly balse tababare Solskjaer ayaa doonaya inuu ku xasiliyo Maguire kaddib markii ay booska lixaad kaga soo dhammaysteen miiska kala sarreynta.
Si kastaba, Haatan United ayaa qaadatay go’aanka ah inaysan wax ka badan 75 Milyan ka bixinin saxeexa 26 jirkan taas oo la micno ah inaysan doonayn inay ka dhigaan daafaca ugu qaalisan abid sida laga soo xigtay National.
Haatan kubadda ayaa taala dhinaca Leicester waxayna u baahan doontaa ama inay hoos u dhigto lacagto ka badan £80-ka Milyan ee ay Maguire ku qiimaynayso amaba ay sidaas ku haysato.
Warar kale ayaa sheegaya in Foxes ay haatanba suuqa ugu jiraan bedelka Maguire isla markaana ay isha ku hayaan Lewis Dunk oo ka tirsan Brighton.